२०७८ बैशाख २१ मंगलबार ०३:१७:००
शव दुई–तीन दिनसम्म छेउमै रहँदा वरिपरिका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीसमेत मनोवैज्ञानिक तनावमा
नेपालगन्जजस्तै कोरोना ‘हट स्पट’ बनेको धनगढीको प्रादेशिक अस्पतालमा शव व्यवस्थापनमा समस्या, शव दुई–तीन दिनसम्म छेउमै रहँदा वरिपरिका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीसमेत मनोवैज्ञानिक तनावमा, भित्र शवले बेड ओगट्दा बाहिर सिकिस्त बिरामी भर्ना नपाएर छटपटाउँदै
नेपालगन्जमा विश्वराज पछल्डङ्ग्या, सुर्खेतमा रमेश रावल, भैरहवामा दिपेश पछाई, पोखरामा गोविन्द सुवेदी, भरतपुरमा विवेक पोख्रेल, वीरगन्जमा तिवारी यादव र धरानमा देवेन्द्र कार्की
सेती कोरोना विशेष अस्पताल धनगढीमा उपचाररत व्यक्तिको मृत्यु भएपछि बेडमै राखिएको शव । यस्ता शव एक, दुई र तीन दिनसम्म अस्पतालका बेडमै रहन्छन् । बिरामीका एक आफन्तले नयाँ पत्रिकालाई पठाएको तस्बिर
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले भने मृत्यु भएको प्रमाणित गर्न र शव व्यवस्थापनका लागि सेना र परिवारका सदस्यलाई बुझाउन समय लाग्ने गरेको बताए । कहिलेकाहीँ परिवारका सदस्य समयमा नआउँदा पनि व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘जतिसक्दो छिटो शव व्यवस्थापन गर्न अस्पताल तत्पर हुन्छ, तर कोरोनाका बिरामीका आफन्त समयमा नआउने र सेनाको शव व्यवस्थापन टोलीले नभ्याउने गरेका कारण केही ढिला हुने गरेको छ,’ डा. थापाले भने ।
सुर्खेत/ सञ्चारकर्मी नगेन्द्र उपाध्याय केही दिनअघि रुघाखोकी बढ्दै गएर सास फेर्न असहज भएपछि कर्णाली कोभिड विशेष अस्पताल भर्ना भए । शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम देखियो, त्यसैले अक्सिजन दिएर उनको उपचार सुरु भयो । शरीरमा अक्सिजनको आवश्यकता त पूरा हुँदै थियो, तर वार्डभित्रका दृश्यले मानसिक रूपमा भने उनलाई गलाउँदै लग्यो । सँगै अस्पताल आएका सामान्य देखिने एक संक्रमितको स्वास्थ्य एकैपटक बिग्रियो । अक्सिजन दिँदादिँदै उनको ज्यान गयो । आफू बसेकै वार्डमा अन्य चार संक्रमितले पनि प्राण त्यागे । एकातिर यो डर थियो अर्कोतिर मृत्यु भएपछि घन्टौँ शव नउठाउँदा मनोवैज्ञानिक रूपमा उनी निकै कमजोर बने ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालका फोकलपर्सन डा. केएन पौडेलले विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयलगायतका कारणले मृतकको शव उठाउन १२ घन्टाजति लाग्ने गरेको बताए । ‘दिउँसो मृत्यु भएकाहरूको हकमा अलि चाँडै शव उठाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘बेलुका पाँच बजेपछि मृत्यु भएमा समय लाग्ने गरेको छ ।’ यहाँ पनि शव व्यवस्थापनको काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । ‘हरेक संक्रमितको मृत्युको खबर अस्पतालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउँछ । त्यहाँबाट नेपाली सेनालाई खबर हुने भएकाले दिउँसो मृत्यु भएकाहरूको शव अलि चाँडो उठ्ने गरेको छ,’ डा. पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बेलुका मृत्यु भएको अवस्थामा भने प्रोटोकल फलो गर्दै जाँदा ढिला कार्यान्वयन हुने हुँदा अलि लामो समयसम्म शव बेडमै रहन्छ ।’
भैरहवा/ गत साता बुटवल उपमहानगरपालिका निवासी ४६ वर्षीया एक शिक्षिकाको भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा कोरोना उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । दुई दिनदेखि ‘भेन्टिलेटर सपोर्ट’मा रहेकी उनको राति पौने ९ बजेतिर ज्यान गएको थियो । उनको मृत्यु भएपछि सो वार्डमा उपचार गराइरहेका अन्य २४ बिरामी थप आत्तिए । ती महिलाको शव त्यहाँबाट हटाउन चार घन्टा लाग्यो ।
पोखरा/ गण्डकी मेडिकल कलेजको आइसियूमा उपचाररत पर्वतका एक संक्रमितको शनिबार बिहान ३ बजे आइसियूमा ज्यान गुम्यो । अस्पतालले शव उठाउन सेनालाई खबर ग¥यो । तर, सेनाको टोली बिहान ९ बजे मात्रै आयो । आफन्तलाई दिउँसो १२ बजेसम्ममा अन्त्येष्टिस्थल पोखरा– ३३ कोत्रे पुग्न भन्दै शव लिएर गएको सेनाको टोली भने साँझ ४ बजेसम्म पनि अन्त्येष्टिस्थल पुगेन ।
भरतपुर/ भरतपुर अस्पतालको कोभिड आइसियूका मेडिकल अफिसर दीपक शाहले दोस्रो कोभिड संक्रमणको यो समयमा आफ्नै आँखाअघि तीनजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु देखे । तर, ती शव तत्कालै व्यवस्थापन हुन सकेनन् । उनले भने, ‘कारण थियो, अन्य बिरामीको शवझैँ निकाल्न र परिवारलाई जिम्मा दिन नमिल्ने प्रावधान ।’
वीरगन्ज/ वीरगन्ज महानगरपालिका– ८ गहवाकी ५० वर्षीया एक महिला कोभिडको संक्रमणपछि उपचारका लागि वैशाख पहिलो साता नारायणी अस्पताल भर्ना भइन् । अस्पतालमा पाँच दिन रहँदा उनी बसेको वार्डमा पाँच अन्य संक्रमितले ज्यान गुमाए । ‘जबजब संक्रमितको मृत्यु हुन्थ्यो, मेरो मनमा बाँच्ने आशा कम हुन्थ्यो,’ अहिले घरमै आराम गरिरहेकी ती महिलाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘हामी कोही पनि बाँच्दैनाँै होला भन्ने लाग्थ्यो ।’
नारायणी अस्पतालका कोभिड कोर्डिनेटर डा. सरोजरोशन दासले कम्तीमा दुई घन्टामा शव अस्पतालबाट निकाल्ने गरिएको बताए । ‘प्रशासन, सेना र मृतकका परिवारको समन्वयमा शव निकाल्नुपर्ने भएकाले अलि ढिलाइ हुने गरेको हो,’ डा. दासले भने । वीरगन्जमा कोरोना संक्रमण दरसँगै गम्भीर संक्रमितको संख्या र मृत्युदरसमेत बढ्दै गएकाले पनि शव व्यवस्थापन चाँडो गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
धरान/ धरान उपमहानगरपालिकाको न्यायपालिका सदस्य विकास बनेपाली कोभिडलाई हराएर घर फर्किएका छन् । लगातार ११ दिन अक्सिजनको सहारामा बसेका उनी अहिले निको भइसकेका छन् । तर, अस्पताल बसाइमा उनले भोगेको अनुभव युद्धजत्तिकै कठिन छ ।
प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहका अनुसार हाल आठजना आइसियू बेड, २२ जना एचडियू बेड र १५ जना साधारण बेडमा उपचार गराइरहेका छन् । प्रतिष्ठानमा जम्मा १५ वटा आइसियू बेड छन् । आइसियू बेडमा भेन्टिलेटरसहितको सुविधा छ । एचडियू बेडमा अक्सिजन जडान गरिएको छ । तर, एक सय बेड क्षमता भएको प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढ्दै छ । हाल भर्ना भएका प्रायजसो बिरामी जटिल अवस्थाका रहेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चूडामणि पोखरेलले बताए । यो अवस्था बढिरहँदा शव व्यवस्थापनमा हिजोकै जस्तो कमजोरी हुने हो भने उपचार अभावमा धेरैले ज्यान गुनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।